मैत्रीपूर्ण गल्फको उपाधि क्या. मिनजंग र क्या. महेन्द्र फगामीलाई - Kheladi News Kheladi News
मैत्रीपूर्ण गल्फको उपाधि क्या. मिनजंग र क्या. महेन्द्र फगामीलाई
नवलपुर(खेलाडी न्युज)-चौधरी ग्रुप मैत्रीपूर्ण गल्फ प्रतियोगिताको उपाधिमा पोखरेली खेलाडीले बर्चस्व गरेका छन् । नवलपुरको रजहरस्थित चौधरी उद्योग ग्रामभित्रको नाईन होलको गल्फ कोर्षमा आईतबार भएको प्रतिस्पर्धामा स्टेबल फोर्ड तर्फको प्रतिस्पर्धामा क्या.मिनजंग गुरुङले उपाधि उचाल्दा स्ट्रोक प्ले तर्फको प्रतिस्पर्धाको ट्रफी भने क्या. महेन्द्र फगामीले कब्जा गरे ।
गुरुङले १८ होल पुरा गर्दा फ्रन्ट नाईनमा २२ र व्याक नाईनमा १९ हिर्काउँदै समग्रमा ४१ स्कोरसहित उपाधि आफनो नाममा लेखाउन सफल भएका हुन् । बसन्त गौचनले रनर अफमा चिक्त बुझाए । उनी ३८ स्कोरमा सीमित भए । राजु थकालीले तेस्रो स्थानमा आउँदा ३७ स्कोर गरे । स्टेबल फोर्डमा गल्फरको ह्याण्डीक्याप घटाई प्वाईन्टको आधारमा विजेता चयन गरिने छ । पार हिर्काउँदा २ प्वाईन्ट जोडिन्छ । बर्डीले ३ प्वाईन्ट पाउँछ । ईगलको सबैभन्दा बढी ४ प्वाईन्ट हुने छ । बोगी खेपेपनि १ अंक जोड्दै काउन्ट गरिन्छ ।
४ ओभर ६८ खेलेका क्या.महेन्द्र फगामीले स्ट्र«ोक प्लेको उपाधि जितेका हुन् । त्यसैगरी क्या. लालबहादुर गुरुङ रनर अफमा चिक्त बुझाए । क्लोजेष्ट टु दि पिनको पुरस्कार भने गोविन्द गौचनले पाए । प्रतियोगिताकै सवैभन्दा पाका खेलाडी ६४ वर्षिय गौचनले ग्रिनको होलदेखि ३ यार्ड टाढा बल खसालेका थिए । लङगेष्ट ड्राईभको ट्रफी भने बसन्त गौचनको भागमा परेको थियो । उनीहरुलाई सिजी गल्फ क्लबका क्या.सुधिर राई लगायतले ट्रफी प्रदान गरेका थिए ।
हिमालयन गल्फ कोर्षका व्यवस्थापक एवं नेपाल गल्फ संघका केन्द्रीय सदस्य भुवन गुरुङको नेतृत्वमा पोखराको टोली मैत्रीपूर्ण प्रतियोगितामा खेल्न नवलपुर आईपुगेको थियो ।
प्रतिस्पर्धामा १३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । गल्फरहरु पहिलो पटक सिजीको गल्फ क्लबमा सहभागिता जनाएका हुन । काठमाडौंबाट खेलाडीले सहभागिता भने जनाएनन् । चौधरी ग्राम भित्रको गल्फ कोर्ष केवल ९ होलको मात्रै छ । ९ होललाई दोहोर्याएर १८ होल पुरा गरेका थिए । १८ होल खेल्दा केवल ६४ पार मात्रै छ । जुन अन्य गल्फ कोर्षभन्दा सानो हो । सामान्यत गल्फ कोर्ष पार ७० देखि ७२ को हुन्छ ।
गर्मीको मौसममा गल्फ खेल्न खासै उपयुक्त भने नदेखिने सहभागिहरुको भनाई थियो । हिउँदको समयमा गल्फ खेल्न उपयुक्त हुने विश्वास उनीहरुले लिएका छन् । पुरस्कार वितरणसँगै क्लब क्याप्टेन राईले गल्फको विकास र विस्तारको लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गल्फको विकासको लागि पोखराको खेलाडी नवलपुर र नवलपुरका खेलाडी पोखरा गई खेल्दै प्रवद्र्धनात्मक अभियानमा जुट्नुपर्ने बताए ।